परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा चौथो पटक भारत भ्रमणमा जाँदै, के–के छ तयारी ? « Pahilo News
परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा चौथो पटक भारत भ्रमणमा जाँदै, के–के छ तयारी ?
प्रकाशित मिति : 10 June, 2016 4:59 am
२९ जेठ । उप–प्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा दक्षिणएसियाली विश्वविद्यालयको नयाँदिल्लीमा हुने दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दैछन् । दुई दिने दिल्ली बसाईका क्रममा मन्त्री थापाले दिल्लीमा महत्वपूर्ण भेटघाट गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
राप्रपा नेपालका सह–प्रवक्ता तथा मन्त्री थापाका नजसम्पर्क सल्लाहकार मोहन श्रेष्ठले दिएको जानकारी अनुसार थापाले शुक्रबार साँझ भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।
दिल्ली बसाईका क्रममा मन्त्री थापाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पनि भेट गर्ने कार्यक्रम छ । भेटमा नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा पनि छलफल हुने बुझिएको छ । त्यसैगरी स्वराजसँगको भेटमा नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको नयाँ बैठकको मिति तय गर्ने विषयमा छलफल हुने छ ।
भारतीय प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस आईकी अध्यक्ष सोनिया गान्धीसँग पनि मन्त्री थापाले भेट्ने कार्यक्रम छ । तर, समय तय नभएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । मन्त्री थापा दिल्लीस्थित प्रभावशाली थिंक ट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनले नेपालको संविधान निर्माणपछिको अवस्थाबारे आयोजना गर्ने अन्तक्रियामा पनि सहभागी हुनेछन्।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठनपछि थापाको यो चौथो भारत भ्रमण हो। यो भ्रमणका क्रममा थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमण रद्द भएपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धका बारेमा पनि कुराकानी गर्ने बुझिएको छ । थापा आइतबार स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ। फाइल तस्बिर